सबैभन्दा महिलाहरु प्रजनन उमेर एक विश्वसनीय र प्रभावकारी गर्भनिरोधक चयन को समस्या सामना। वर्तमान मा उत्पादनहरु को ठूलो विविधता भए तापनि धेरै धन contraindications छ वा केही अन्य कारणले प्रत्येक व्यक्तिगत मामला मा उपयुक्त छैन। मौखिक गर्भनिरोधक चक्की सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम को एक जो विशेषज्ञहरु पनि एक युवा उमेर मा, यो सिफारिस के संग जडान, एक बरु नम्र कार्य छ, "regulon" छन्।
मुख्य सक्रिय पदार्थ desogestrel र ethinyl estradiol छन्, तिनीहरूले ovulation घेरा कारण, केही हर्मोन को secretion बाधित; को खकार यसलाई को विशेषताहरु लागि परिवर्तन किनभने शुक्राणु छैन खुलेर को गर्भाशय मा प्राप्त गर्न सक्छन्। fertilized सेल पहिले नै उपलब्ध छ भने, यो गर्भाशय छैन प्रत्यारोपित गर्न सकिन्छ। यो दबाइ "regulon" निर्देश पुस्तिका यस्तो menstrual विकार, dysmenorrhea रूपमा अवस्थामा एक उपाय रूपमा सिफारिस गर्ने उल्लेख गर्नुपर्छ, premenstrual सिंड्रोम कडा व्यक्त गरे।
दबाइ को कोटेडफिल्म को सफेद रंग को एक biconvex ट्याबलेट, छ। आफ्नो भर्ना आफ्नो चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् गर्नुपर्छ अघि रूपमा सबै अवस्थामा उपयुक्त हुन सक्छ। दबाइ भने "regulon" निर्देशन प्रयोगबारे जो केही विस्तार, रूपमा प्रयोग गरिन्छ एक गर्भनिरोधक, सुरक्षा को अतिरिक्त हालतमा छैन आवश्यक छ।
गोली लिएर नयाँ menstrual चक्र संग एकै समयमा सुरु गर्नुपर्छ। जबकि नै समय मा दिन मा, एक ट्याब्लेट पिउन गर्नुपर्छ। त्यो प्राथमिकताको भोजन समयमा, तरल तल धोए। पाठ्यक्रम एक प्याकेज यसलाई मा खर्च छ,3सप्ताह रहन्छ। पछि यो रक्तस्राव हुन्छ जुन बेलामा भनिन्छ महिनावारी एक हप्ता ब्रेक गरेको छ। थप तयारी नै योजना द्वारा मादक पदार्थ सेवन छ।
यो tablekti कि यो lactation को कमी असर गर्न सक्छ रूपमा "regulon" निर्देश पुस्तिका नर्सिङ आमा सिफारिस गर्दैन लायक उल्लेख छ। अन्य अवस्थामा, वितरण हालतमा पछि 21 दिन भित्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक गर्भनिरोधक औषधिको "regulon" को रूपमा गर्भपतन पछि पहिलो दिन देखि प्रयोग भएको छ। यस्तो देखि संक्रमण समयमा दबाइ को एक पाठ्यक्रम सुरु गर्न मौखिक गर्भनिरोधक गोली दुई माध्यम बीच एक ब्रेक नगरी लिएको।
अवस्थाहरू जहाँ महिनावारी को आवश्यक पछि सार्ने काम, रिसेप्शन बीच एक हप्ता ब्रेक छैन। यसरी कहिले काँही smearing वा लागूपदार्थको को प्रभावकारिता प्रभावित बिना आक्रान्त देखा पर्न सक्छन्।
regulon लिएर अघि, दबाइ को contraindications परिचित हुनुपर्छ। तिनीहरूलाई बीच, गर्भावस्था वा आशङ्का यो उच्च रक्तचाप, cholelithiasis, मधुमेह, herpes, साथै लागूपदार्थको गर्न संवेदनशीलता। साथै, दुर्लभ अवस्थामा, एलर्जी प्रतिक्रिया, जब तिनीहरूले देखा, दबाइ बन्द र गर्भनिरोधक प्रयोग गर्नुपर्छ उत्पन्न हुन सक्छ।
त्यो "regulon" ट्याब्लेटको प्रयोग सुरु गर्नु अघि, प्रयोगको लागि निर्देशन यसलाई द्वारा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यस अवस्थामा, ट्याब्लेट छुटेका गरिएको छ, यो निम्न नियमहरु द्वारा निर्देशित हुनुपर्छ। यो 12 भन्दा कम घण्टा भर्ना पछि भएको छ भने, दबाइ लिएको छ, र त्यसपछि पाठ्यक्रम सामान्य मोड मा आयोजित गरिएको छ। यो अब भएको छ भने, तपाईं, अर्को दिन दुई चक्की पिउन रूपमा यो दबाइ लिइरहेको जारी, तर गर्भनिरोधक थप हालतमा साथै यो चक्र मा विश्वसनीयता अब निर्माता द्वारा प्रत्याभूति गरिएको छ प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
साथै, दबाइ "regulon" प्रयोगको लागि निर्देशन antispasmodics जस्ता औषधिहरू, (स्टेटजोन्स wort सहित) एन्टिबायोटिक र जडीबुटी केही प्रकारको संयोजनमा लिन सिफारिस गरिएको छैन।
औषधि "FURAMAG": समीक्षा र पुस्तिका
"Exforge": समीक्षा, प्रयोग र संरचना लागि चिकित्सा लिए गर्नेहरूलाई, निर्देशन
"Fenspirid": प्रयोग, सङ्केत गर्छ, contraindications, समीक्षा लागि निर्देशन
विकल्प र एनालग "Lipitor": समीक्षा
को प्याच बल्न लागि प्रभावकारी छ कि छैन भनेर? जला पैच को प्रकार
कुकुर लागि "Mastometrin": प्रयोग, संरचना र समीक्षा लागि निर्देशन
काठ रेलवे स्लीपरहरुको को आयाम। प्रबलित ठोस स्लीपरहरुको: आयाम
कसरी स्कूल मा आमाबाबुले संग काम छ?
बन्दागोभी लागि आफ्नो नुस्खा चयन गर्नुहोस्।
Erythrocyte: संरचना, रूप र प्रकार्य। मानव रातो रक्त को संरचना
कन्स्टान्टिन केयरव्वे एक प्रतिभाशाली डिफेंडर हो
Naberezhnye Chelny - हरेक स्वाद को लागि होटल
कला डेको शैली मा बेडरूम - सान्त्वना र सौहार्द को personification
गाउँमा Roshchino, Leningrad
घरमा खोकी लागि प्रभावकारी उपचार तयार